Obbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’e muudame – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooObbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’e muudame
Pirezdaantii IA Mootummaa Naannoo Oromiyaa Tahuun muudaman. Sababa IA taheef miseensa caffee waan hin taheefi hojii pirezdaantummaa dabalee kan hojjatu taha.
Gama birootinis Obbo Addisuu Araggaa IG waajjira ODP giddu galeessa tahuun bakka Alamuu simee qabatanii jiru.
Obbo Shimallis Abdiisaa Eenyu?
By UAE Oromo Community
Obbo Shimallis Abdiisaa Itti Aanaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka ta’an miidiyaalee hawaasaarratti bal’inaan haasawamaa jira Obbo Shamallis Eenyu?
Obbo Shimalliis #Giincii’ttii dhalatee kan guddatee fi achumatti barachuun hanga yunivarsiitiitti gahuuf qophaa’ina isaa xumure. Obbo Shamallis Bara 1996 – 2000 gosa barnoota Filoosofiitiin Yunivarsitii Finfinneerraa Digrii jalqabaa fudhachuun bahee achumatti deebi’uun barsiisaa ta’uun yeroo muraasa erga tajaajilee booda digirii lammaffaa isaa barnoota gosa “HUMAN RIGHTS’ tiin baratee eebbifame. Itti fufuunis Yunivarsiitii Afrikaa Kibbaatt (UNISA ) barachuun gosa barnootaa ‘LEADERSHIP’ tiin digirii lammaffaan eebbifame.
Obbo Shimallis amalli isaa tasgabbaawaa fi ilaalcha walqixxummaa namaatti amanuun kan beekamu dha. Akkasumas yaada bilchaataa fi ijaaraa ta’e kamiyyuu kan nama kamiyyuu irraa maddetti kan amanu dha. Waan ummata isaaf malu eessumaayyuu haa ta’u ittiin hojjachuu fi wajjin hojjachuuf nama si’aayina qabu dha. Kun immoo amma Obbo Lammaatiin kan walfakkaatu ta’uu beeksisa.
Obbo Shimallis dargaggoonni humna biyyaaf abdii boruu ta’ani dha jedha. Dargaggoonni har’as biyyaaf akka abdii ta’an hojiidhaan hojjatee kan agarsiise dha. Hojiiwwan gurguddoo dargaggoota Oromiyaatiif fakkeenya ta’an hojjateera. Hanga ammaattis Ministira Itti Gaafatamaa Waajjira Ministira Muummichaa ta’uun tajaajilaa ture.
Ilmi Abbaa Gadaa Oromtichi Giincii kun ammas akkuma qabsoon qeerroo Amboo fi Giiciirraa kaatee finiintee Oromiyaa waliin gahuun Oromoo bilisoomsite innis akka Oromiyaa daran cimsu, kanaanis Obbo Lammaan akka gammadu abdii qabna.
Bara hojii gaarii jenneerra.